लोकतन्त्रको हरण !
2077-Falgun-07 || मध्यान्ह
निरंकुश जहानीय शासनको अन्त्य भएको ७० वर्ष पुगेको छ । २००७ सालको क्रान्तिले निरंकुश कालरात्रिको अन्त्य गर्दै मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको थियो । चार शहीदको बलिदानको जगमा अगाडि बढेको प्रजातन्त्रको लडाइँले राणाशासनको अन्त्य गरेको सम्झना हरेक वर्ष प्रजातन्त्र दिवस मनाइदै आएको छ । वर्तमान सरकारले पनि प्रजातन्त्र स्थापना दिवसको अवसरमा भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । माघ १६ मा शहीद दिवस मनाएको सरकारले प्रजातन्त्र दिवस मनाउने पहलकदमी लिएको छ । स्थानीय तहसम्मै प्रजातन्त्र दिवस मनाइदैछ । प्रजातन्त्र दिवसको सम्झनामा सरकारी मात्रै नभएर गैरसरकारी निकायबाट पनि उत्सव मनाउने गरिएको छ । राजतन्त्रको अन्त्य हुनु अगाडि भने प्रजातन्त्र दिवस भव्य रुपमै मनाउने गरिएको थियो । तर, व्यवस्था बदलिएसँगै अहिले लोकतन्त्र दिवस, गणतन्त्र दिवस समेत मनाइने हुँदा प्रजातन्त्र दिवस थोरै ओझेलमा परेको छ । तर, यो दिवसको विशेष महत्व छ ।
किनभने, अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग पनि त्यही ००७ सालको क्रान्ति थियो । राणाशासन अन्त्य पछि पहिलोपटक जनताका प्रतिनिधिले मुलुकमा शासन सम्हालेको थियो । तर, २०१५ सालको जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विशेश्वरप्रसाद कोइरालाको सरकार अपदस्त गरेर राजा महेन्द्रले कू शुरु गरे । नेपाली काँग्रेसका संस्थापक सभापति कोइरालाको सत्तामाथि कू गरिएकै कारणले मुलुकले फेरि पनि लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि लामो समय संघर्ष गर्नु परेको थियो । जनताको शासन प्रणाली खोसिएकै कारण मुलुकले ३० वर्षे पञ्चायती शासन खेप्नु पर्‍यो । तर, प्रजातान्त्रिक शक्ति र वाम शक्तिको निरन्तरको लडाइँपछि मुलुकमा २०४६ मा फेरि प्रजातन्त्र स्थापना भयो । तर, २०५९ र ०६१ मा फेरि राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता हातमा लिए ।
यसको मूल्य भने राजतन्त्रले नै चुकाउनु प¥यो । दश वर्षे सशस्त्र विद्रोह र २०६२/०६३ को दोस्रो जनविद्रोहबाट राजतन्त्रको अन्त्य भयो । मुलुकमा लोकतन्त्रको स्थापना भयो । २०६४ को निर्वाचन पछि राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै मुलुकलाई गणतन्त्र घोषणा गरियो । २०७२ मा संविधान जारी भएपछि मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बन्यो । तर, यसको पाँच वर्ष नबित्दै फेरि मुलुक राजनैतिक र संवैधानिक संकटतर्फ उन्मुख भएको छ । प्रजातन्त्र दिवसको भव्य आयोजना गरिरहेकै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संसद् विघटन गरेका छन् । यसबाट निम्तिएको भय भने फेरि कतै लोकतन्त्रको हरण हुने त होइन ? भन्ने नै हो । तसर्थ, प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहँदा नेपालको सात दशक लामो राजनीतिक उतारचढाब र संघर्ष सम्झनु उचित हुनेछ ।
चलखेललाई निम्तोसम्पादकीय | 2077-Falgun-17
भूमिका भुलेको आयोगसम्पादकीय | 2077-Falgun-16